Puntland iyo QM oo ka wada hadlay xuquuqda aadanaha. – Radio Daljir
Puntland iyo QM oo ka wada hadlay xuquuqda aadanaha.
Luulyo 18, 2016 9:13 b 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 18-July-2016 qasriga Madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo ku qaabilay uqaabilsanaha Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobey ee dhinaca Carruurta iyo isku dhacyada dagaallada hubaysan haweeneyda lagu magcaabao Leila Serrougui iyo wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayso
Waftigaan ayaa waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka wakiilka xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Somalia ee dhinaca Aadanaha Peter Declercq iyo Madaxa hay’adda Unicef ee Somalia Steven Lauwerier iyo saraakiil ka tirsan hay’adaha Qaramada Midoobey.
Masuuliyiintaan ayaa Puntland u yimi sidii ay wax uga ogaan lahaayeen heerka ay marayso ilaalinta xuquuqul Insaanka ee Puntland, waxaanay ku ammaaneen Madaxweynaha dawladda Puntland sida ay dawladdiisu ula dhaqantay carruurtii yaryarayd ee lagu soo qabtay dagaalladii u dhexeeyey Puntland iyo kooxda shabaab.
Masuuliyiintaan ayaa sheegay in Puntland ay heer wanaagsan ka joogto dhinaca ilaalinta xuquuqul Insaanka isla markaana waxa ay ballan qaadeen in ay sii xoojinayaan mashiircda horumarineed ee la xiriira dhinaca adeegyada Garsoorka, waxbarashada carruuta iyo Jeelasha ee ay fuliyaan Puntland.
Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay weftigaani in ay soo booqdaan Puntland si’ay si dhow wax uga ogaadaan heerka ilaalinta xuquuqul Insaanka ee Puntland, waxaana uu xusay Madaxweynuhu in ay dawladdiisu diyaar u tahay sii xoojinta ilaalinta xuquuqul aadanaha, gaar ahaan xannaanaynta carruurta lagu soo qabto goobaha dagaalka.
Waftigaan ayaa booqan doona xabsiga weyn ee Puntland ee magaaalada Garoowe waxayna kulamo la qaadan doonaan Wasaaradda Caddaaladda iyo arrimaha diinta oo iyadu gacanta ku haysa xabsiyada Puntland.
Dhagayso Xildhibaan Dhoobo: Sharci ma ahan in la joojiyo codkeena, waana khalad taariikhi ah
DHEGEYSO-Khasaaraha Dagaalo kadhacay Sanaag iyo Haylaan.